မဉ္ဇူရီနယ် အက်ဘီမြို့ပြင်က ဘေဘုတ်သုံးခု (ရုပ်ရှင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
မဉ္ဇူရီနယ် အက်ဘီမြို့ပြင်က ဘေဘုတ်သုံးခု သည် ၂၀၁၇ ထွက် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး မာတင် မက်ဒိုနာ့ ရိုက်ကူးသည်။ အမေရိကန်၌ နိုဝင်ဘာလတွင် ရုံတင်ပြီး ဗြိတိန်၌ ၂၀၁၈ ခု၊ ဇန်နဝါရီလရောက်မှ ပြဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အထွာနှင့် ပြသငွေ ဒေါ်လာ(၁၅၉) သန်း ရသည်။
စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၉-၀၄) (Venice)
နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၁၁-၁၀) (United States)
ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၁-၁၂) (United Kingdom)
အကြိမ် (၉၀) မြောက် အော်စကာဆု ပေးပွဲတွင် ဆု (၇) ဆု ဇကာတင်ဝင်ပြီး (၂) ဆု ရသည်။ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု (၄) ဆု ရသည်။ ဘက်ဖတာဆု (၅) ဆု ရသည်။
၃ ဇာတ်ကား ရိုက်ခတ်မှု
မဉ္ဇူရီနယ်၊ အက်ဘီမြို့တွင် မေဒရတ်ဟေး (Mildred Hayes) မှာ သမီး အန်ဂျလာ (Angela) မတော်ပြုကာ အသတ်ခံရခြင်းကြောင့် ခုနှစ်လကြာသည့်တိုင် ပူဆွေးနေသည်။ ရဲတို့ ဆက်စုံစမ်းသည်လည်း မရှိရာ မေဒရတ်က မြို့ပြင်ရှိ ဘေဘုတ် (၃) ခုကို ငှားပြီး "သေလုမျောပါးဖြစ်နေတုန်း အဓမ္မကျင့်ခံရတယ်" (RAPED WHILE DYING)၊ "ခုထိလည်း လက်သည်မတွေ့ဘူးလား" (STILL NO ARREST?)၊ "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ရဲမှူးဝီလဘီ" (HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY?) ဟူသော စာများ တင်လိုက်သည်။ ထိုဘုတ်များမှာ မြို့အား အရုပ်ဆိုးစေသည်ဟု ယူဆကာ မြို့ခံအများစုက မကျေနပ်။
ဝေလဘီ၏ သရက်ရွက်ကင်ဆာ ဇာတ်လမ်းကို လူတိုင်းသိနေရာ မေဒရတ်မှာ လူကြမ်းဖြစ်နေသည်။ အစွဲကြီးသော အရာရှိ ဂျေဆန် ဒီဆွန် (Jason Dixon) က ဘေဘုတ်ငှားလိုက်သူ ရက်ဝဲဘီ (Red Welby) ကို ပြဿနာ သွားရှာသည်။ မေဒရတ်နှင့် တွဲကာ ဆိုင်ဖွင့်နေသည့် ဒနိ (Denise) ကိုလည်း ဆေးခြောက်မှုနှင့် စိသည်။
မကြာခဏ သွေးအန်ပြီးနောက် ဝေဒနာခံစားကာ မသေချင်သည့် ဝေလဘီက မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သည်။ ဘေဘုတ်ကြောင့်ဟု ယူဆကာ မေဒရတ်ကို တိုက်ခိုက်သူများ ရှိလာသည်။ စိတ်မြန်သော ဂျေဆန်က ရက်ဝဲဘီကို ရိုက်နှိပ်ကာ ပြတင်းပေါက်မှ တွန်းချသည်။ သို့ဖြင့် သူလည်း အလုပ်ပြုတ်သွားသည်။
ဘေဘုတ်များ မီးရှို့ခံရသည်။ ရဲတို့က တာဝန်မယူပြန်။ မေဒရတ်က ရဲစခန်းအား အရက်ပုလင်းနှင့် မီးပစ်သည်။ ကံမလျော်စွာ ဝီလဘီ၏ စာကို ယူရန် ရောက်နေသည့် ဂျေဆန်ပါ မီးသင့်သွားသည်။
ဆေးရုံမှ ဆင်းပြီးနောက် ဘား၌ ရောက်နေစဉ် မိန်းမငယ်တဦးအား ဆွဲလှဲ အတင်းကာရော ပြုပုံကို ပြောနေသည့် လူတယောက်အား ဂျေဆန် တွေ့လိုက်သည်။ ထိုသူ၏ ကားလိုင်စင်မှာ အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ် လိုင်စင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့၍ ဒီအန်အေရရန် အသတ်အပုတ် လုပ်ရသေးသည်။
စခန်းသို့ သတင်းပေးရာ ရဲမှူးသစ် အေဘာခရွန်ဘီ (Abercrombie) က အန်ဂျလာအမှု၏ အပြစ်သားနှင့် မကိုက်ကြောင်းပြောသည်။ ဂျေဆန်ကမူ ထိုသူမှာ အဓမ္မမှုတခုခုနှင့် ညှိရမည်ဟု ကောက်ချက်ချကာ အိုင်ဒါဟိုသို့သွား၍ ထိုသူအား လက်စတုံးမည့် မေဒရတ်နှင့် ပူးပေါင်းသည်။ လမ်းတွင် မေဒရတ်က ရဲစခန်းအား မီးရှို့သူမှာ သူပင်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသည်။ ဂျေဆန်က ဘယ်သူရှိနိုင်သေးလို့လဲဟု ပြန်ပြောသည်။ နှစ်ဦးသား အခက်အခဲများကို ပြောဖြစ်ပြီးနောက် လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းကို လမ်း၌ တိုင်ပင်သွားရန် သဘောညီကြသည်။
မေဒရတ် ဟေး အဖြစ် ဖရန့် မက်ဒေါမန် (Frances McDormand)
ဝီလီယံ ဝီလဘီ အဖြစ် ဝုဒီ ဟာရဲဆန် (Woody Harrelson)
ဂျေဆန် ဒီဆွန် အဖြစ် ဆမ် ရော့ဝဲ (Sam Rockwell)
၂၀၁၈ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် ဂရမ်းဖဲတာဝါ မီးလောင်မှုအတွက် ဗန်ကားသုံးစီးငှား၍ လန်ဒန်မြို့ထဲ လှည့်လည် ဆန္ဒပြကြရာ အီလက်ထရောနစ်စခရင်များနှင့် ဇာတ်ကားထဲသို့ပင် "၇၁ ယောက် သေတယ်" (71 DEAD)၊ "မိတယ်ဆိုတာ မရှိဘူးလား" (AND STILL NO ARRESTS?)၊ "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ" (HOW COME?) ဟူသော စာသားများ ဖော်ပြခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Film releases။ Variety Insight။ July 28, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 3, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NINE BILLBOARDS OUTSIDE EDMOND, MISSOURI (15)။ British Board of Film Classification (November 2, 2017)။ January 21, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ D'Alessandro၊ Anthony (December 1, 2017)။ Exhibition Rings Up Fox Searchlight To Expand 'Three Billboards' Coast To Coast – Box Office။ December 1, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "2017 Feature Film Study" (August 8, 2018). FilmL.A. Feature Film Study. Retrieved on August 9, 2018.
↑ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)။ Box Office Mojo။ June 24, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဉ္ဇူရီနယ်_အက်ဘီမြို့ပြင်က_ဘေဘုတ်သုံးခု_(ရုပ်ရှင်)&oldid=465128" မှ ရယူရန်
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။